Maaratoon fiige moo Kubbaadha taphate? -
Maaratoon fiige moo Kubbaadha taphate?
By: Munawar Ahmed Siraj
Maaratoon fiige moo
Bishaan daakeeti moo
Maali sababni Hagos illee
Geeba itti fudhate?
Har’a dhugaan hafee
Dubbii bara kanaa
Ofumaa wal kabee
Bahaa fi dhihatti
Wal bira dhaabbatee
Nurraa hin dhukanne
Hojiin itti jirtan,
Lammii teenya fixxan
Geeba waliif hirtan.
Kun tuffiidha malee
Jibba qofaa miti,
Hagoos illee balaa
Garaa nama gubdi.
Previous AKKA HUNQAA OSOO GUBATUU KOFLUUN OROMOO GOOLABAMUU QABA.
Next Dhaabbanni keenya Dh.D.U.O.n gaafii ummata deebise..kkk